रेडमी नोट ७ प्रो : शक्तिशाली स्न्यापड्र्यागन ६७५ सहित सोनी ४८ एमपी क्यामेरा | गृहपृष्ठ
Home प्रविधि रेडमी नोट ७ प्रो : शक्तिशाली स्न्यापड्र्यागन ६७५ सहित सोनी ४८ एमपी क्यामेरा
on: July 08, 2019 प्रविधि
रेडमी नोट ७ प्रो : शक्तिशाली स्न्यापड्र्यागन ६७५ सहित सोनी ४८ एमपी क्यामेरा
काठमाडौं । शाओमीले रेडमी नोट ७ प्रो नेपालमा ल्याएको छ । रेडमी नोट लाइनअपको डेब्यूदेखि नै यो फोनले अपग्रेड गर्दै आएको छ ।
शाओमी नेपालका ब्रान्ड म्यानेजर पारस सिलवालका अनुसार रेडमी नोट ७ प्रो रेडमी नोट लाइनको एक उल्लेख्य अनुवृद्धि हो, जसले जीवनको मूल दर्शन र सबैका लागि नवीनतम सृजना ल्याएको छ । रेडमी नोट ७ प्रोमा सोनीको ४८ एमपी शक्तिशाली क्यामेरा छ यसलाई क्वालकम स्न्यापड्र्यागन ६७५ ले सुसज्जित गरेको छ र यसमा आश्चर्यजनक औरा डिजाइन रहेको छ ।
रेडमी नोट ७ प्रोमा रेडमी सिरिजको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा शक्तिशाली औरा डिजाइनको अवधारणा छ । यसको अघिल्लो र पछिल्लो भागमा कर्निङ गोरिला ग्लास ५ सँगै रेडमी नोट ७ प्रो स्टाइल तथा फङ्शनभन्दा भिन्न प्रकारको छ । यसमा ६ दशमलव ३ इन्चको डिस्प्ले छ । फोनले क्वालकम क्विक चार्ज ४ लाई सपोर्ट गर्ने बताइएको छ ।
४८ एमपी क्यामेरा
रेडमी नोट ७ प्रो ग्रेडियन्ट डिजाइनमा बनाइएको छ । यो स्पेस ब्ल्याक, नेबुला रेड र नेप्चुन ब्लू कलरहरूमा उपलब्ध रहेको शाओमी नेपालले उल्लेख गरेको छ । यसमा ४८ एमपी सोनी आईएमएक्स ५८६ राखिएको छ ।
शाओमी नोट ७ प्रोलाई सोनी सेन्सर तथा स्पेक्ट्रा २५० एलआईएसपीको एड्भान्स सिग्नल प्रोसेसिङले विशिष्ट बनाएको छ । १ दशमलव ७९ चौडा एपेचर भएकाले यो फोनले कुनै पनि तस्वीर जीवन्त रूपमा खिच्ने उल्लेख छ ।
एमआईयुआई क्यामेराको परिष्कृत एल्गोरिदमका कारण लाइभ पोट्र्रेट, लाइभ स्टुडियो पोट्रेट जस्ता थुप्रै सुविधाको आनन्द लिन सकिन्छ । यो मोबाइलले ब्याकग्राउन्डमा ब्लर इफेक्टका साथ पोट्र्रेट शटका लागि ५ एमपी क्यामेरा सेन्सरले मुख्य ४८ एमपी सेन्सरसँग सहकार्य गर्ने हुँदा तस्वीर उत्कृष्ट तवरको आउने गर्छ । यसको विशेष रूपमा टियुन्ड नाइट मोडले न्यून प्रकाश भएको अवस्थामा पनि राम्रो दृश्य खिच्न सकिन्छ ।
स्न्यापड्र्यागन ६७५ सँग अर्को स्तरको पर्फर्मेन्स
क्वालकम स्न्यापड्र्यागन ६७५ प्लेटफर्मद्वारा सञ्चालित यो विश्वकै पहिलो स्मार्टफोन हो । रेडमी नोट ७ प्रोमा स्न्यापड्र्यागन ६७५ मा भएको ८ क्रियो ४६० कोरमा दुईओटा एआरएम कोर्टेक्स ए७६ रहेको छ । साथै ६ ओटा एआरएम कोर्टेक्स ए५५ कोर पनि छ । यसले गर्दा ब्याटल रोयल गेम र सोसल मिडिया स्ट्रिमिङमा पनि उत्कृष्टता झल्काउँछ । यो फोन ४ जीबी र ६ जीबी ¥याममा उपलब्ध छ । यसमा प्रयोग गरिएको पीटुआई कोटेड बडीले गर्दा दागहरू नलाग्ने हुन्छ । रेडमी नोट ७ प्रो, ४ जीबी प्लस ६४ जीबी भेरियन्टका लागि रू. २५ हजार रुपैयाँ र ६ जीबी प्लस १२८ जीबी भेरियन्टका लागि रू. ३० हजार निर्धारण गरिएको छ ।
रेडमी नोट ७ प्रो सरल विशेषताहरू
६.३ इन्च फुल एचडी (२३४० × १०८०) डट नोच डिस्प्ले
४८ एमपी ५ एमपी ड्युल रियर क्यामेरा
१३ एमपी एआइ पोट्र्रेट मोडका साथ फ्रन्ट क्यामेरा
अक्टाकोर २.० गिगाहर्ज क्वालकोम
४ जीबी र्‍याम र ६४ जीबी मेमोरी
६ जीबी र्‍याम र १२८ जीबी मेमोरी
ह्याब्रिड ड्युल सिम/मेमोरी स्लट
४००० एमएएच ब्याट्री
फिंगरप्रिन्ट सेन्सर र एआई फेस अनलक